पत्नीका लागि सबैभन्दा खराब हुन्छन यी ३ राशिका पति ? जान्नुहोस् !::न्युज बिहानी
पत्नीका लागि सबैभन्दा खराब हुन्छन यी ३ राशिका पति ? जान्नुहोस् !
कन्या राशिका महिला र पुरुष दुवै धेरैनै प्रतिभावान् हुन्छन् । तर विवाहपछि पुरुषको कुरा गर्ने हो भने कन्या राशिका पुरुषलाई राम्रो पति मानिँदैन । ज्योतिषका अनुसार कन्या राशिका आफ्नो पत्नीलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहने खालका हुन्छन् ।यस राशिका पुरुष प्राय आफ्नो पत्नीको आवाज दबाउन खोज्ने खालका मानिन्छन् । एजेन्सी